Semalt ले एसईओ समस्याहरूबाट कसरी बच्न सकिन्छ भनेर बताउँछ जसले खोज रैंकिंग र ट्राफिकमा ड्रप निम्त्याउँछ
यो अनसेटिंगल लाग्न सक्छ, तर कहिलेकाँही, वेबसाइटमा अधिक ट्राफिक प्राप्त गर्नु सधैं के उत्तम हुन्छ भन्ने छैन। अबसम्म नडराउनुहोस्; हामी बुझ्दछौं कि तपाईंको साइटमा यातायात चलाउनु आधारभूत SEO लक्ष्य हो। वास्तवमा, तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ किनकि तपाईं आफ्नो वेबसाइट प्रदर्शन सुधार गर्न चाहनुहुन्छ; यस लेखमा हामी केहि कारणहरू दिइरहेका छौं किन मात्र यातायातको सहि मात्रा हुनु बढी हुनु भन्दा राम्रो हुन सक्छ।
वेबसाइटमा अधिक ट्राफिक उत्पन्न गर्नु भनेको हामी के गर्छौं। यो ग्राहकहरु हामीलाई भ्रमण को एक कारण छ। SEO पेशेवरको रूपमा, यो गर्नु हाम्रो पवित्र कर्तव्य हो। हामी आफैंले वेबसाइट मालिकलाई सेवाहरू रेन्डर गर्दछौं तपाईंको आफ्नै साइटको प्रदर्शनमा सुधार गर्नको लागि विभिन्न रणनीतिक सामग्री योजनाहरू, टेक्निकल अप्टिमाइजेसनहरू, र अन्य।
अर्गानिक यातायात यस्तो चीज हो जुन तपाईं प्रत्येक SEO रिपोर्टमा भेट्नुहुनेछ। ट्राफिक तपाईंको साइटमा स्थानान्तरण हो, ठूलो हदसम्म, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुञ्जी प्रदर्शन सूचक। जबकि तपाईंको साइटमा बढेको ट्राफिकलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो लाग्न सक्छ, यो बुझ्नको लागि यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि इनबाउन्ड ट्राफिकको वृद्धि सदैव शुद्ध सकारात्मकमा अनुवाद हुँदैन।
यहाँ परिस्थितिहरू वर्णन गर्न केहि परिदृश्यहरू छन् जब कुनै साइटमा अधिक यातायात ड्राइभिंगले कुनै राम्रो गर्दैन।
प्रयोगकर्ताहरू आफूले खोजेको कुरा फेला पार्न असफल हुन्छन् र त्यहाँ एउटा उद्देश्य बेमेल छ
यो बुझ्नको लागि सरल छ। कल्पना गर्नुहोस् कि एक आगन्तुकले एक विशिष्ट प्रश्नको लागि खोजी गरिरहेको छ जसको लागि तपाईंको वेबसाइट उच्च स्तरमा छ, त्यसैले तिनीहरू लिंकमा क्लिक गर्छन् र तपाईंको वेबसाइटमा लगिन्छन्। दुर्भाग्यवस, तिनीहरू पुग्ने पृष्ठ उनीहरूको क्वेरीसँग मेल खाँदैन, र तिनीहरू चाँडै छोड्छन्। यसको मतलव तपाईं आफ्नो दर्शकहरूलाई खुशी पार्न असफल हुनुभयो किनकि तपाईंको सामग्री तिनीहरूको अभिप्रायसँग मेल खाँदैन।
अब गुगलको एल्गोरिथ्म जहिले पनि सही पृष्ठमा प्रयोगकर्ताको क्वेरीसँग मेल खाने क्रममा विकास गर्न र यसको शुद्धता सुधार गर्न नयाँ तरिकाहरू खोज्दै छ। यद्यपि यो सँधै सहि हुँदैन। त्यसोभए जब खोजीकर्ताले केहि खोज्दैछ र तपाइँको वेबसाइटमा आउँछ, त्यसले ट्राफिक उत्पन्न गर्दछ, तर यदि ती छिटो छोडिन्छन् किनकि तपाइँको सामग्री अप्रासंगिक छ भने, यसले तपाइँको बाउन्स रेट मेट्रिकमा प्रतिबिम्बित गर्दछ, तपाइँको समय मा साइट मेट्रिक्स, र कम गर्न सक्छ। ।
यी चीजहरूको संयोजनले गुगलको एल्गोरिथ्ममा नकारात्मक संकेत पठाउँदछ, यो सूचित गर्दै कि तपाईंको वेबसाइटको नतीजाहरू क्वेरी वा प्रयोगकर्ताको उद्देश्यका लागि आदर्श विकल्प छैनन्।
तपाईंको सामग्री रणनीति खराब कार्यान्वयन गरिएको छ वा अवस्थित छैन
तपाईको घर भोलिपल्ट गडबडी भएको बखत तपाईले पार्टीलाई होस्ट गर्ने विश्वास गर्नुहुन्न, हुन्न? यदि तपाईंको पाहुना गडबडी घर देखाउँछन् भने, उनीहरूले तपाईंलाई बधाई दिँदैनन् किन उनीहरूले तपाईको घरपालमा कस्तो अचम्मको पार्टी वा अनुभव गरेका थिए। त्यस्तै गरी, जब तपाईं ट्राफिकलाई आकर्षित गर्नुहुन्छ फाउन्डेसनल एसईओ-हुडाहरू बिना नै ठाउँमा, व्यक्ति तपाईंले ती गल्तीहरू सच्याउनको लागि पर्याप्त लामो समय सम्म रहिरहने छैन।
यदि तपाईंसँग पहिले नै राम्रो सोचेको सामग्री रणनीति छैन भने वा यदि तपाईंको वेबपृष्ठहरूमा प्रकाशित सामग्री राम्रोसँग लेखिएको वा संरचना गरिएको छ भने, तपाईंले प्रयोगकर्ताहरू बसेको आशा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको वेबसाइट कति छिटो लोड हुन्छ? के यो मोबाइल अनुकूल छ? तपाईले ट्राफिकलाई आकर्षित गर्न सुरू गर्नु अघि यी प्रश्नहरू सोध्नु पर्छ।
सामग्री रणनीति यति महत्त्वपूर्ण छ कि गुगलले पृष्ठ अनुभव अद्यावधिक सुरू गर्दैछ कि प्रत्येक पृष्ठले प्रयोगकर्ताहरूको आशय कत्तिको सन्तुष्ट पार्छ भन्ने कुराको लागि थप वर्णन गर्न। तपाईलाई SEO आमन्त्रित गर्नु अघि तपाईको एसईओ क्रम मा हुनु पर्छ।
रूपान्तरण अधिक यातायात भन्दा बढी मूल्यवान छ
यहाँ तर्क जुन कुन महत्त्वपूर्ण छ, बढी यातायात वा अधिक रूपान्तरण हो? त्यहाँ धेरै ध्वनि पोइन्टहरू छन् जुन यो तर्कको दुबै पक्षको लागि सिर्जना गर्न सकिन्छ, तर हामी अधिक यातायातमा अधिक रूपान्तरण रुचाउँछौं। यो राम्रो हुन्छ यदि तपाईंसँग आफ्नो साइटमा १००,००० आगन्तुक छन् र them०% रूपान्तरण गरेर २००,००० भएको र केवल १ only% रूपान्तरण गरेमा।
एसईओ को लक्ष्य रूपान्तरण सुधार गर्नु हो; तपाईंको इनबाउन्ड ट्राफिक बृद्धि गर्नु त्यो लक्ष्य हासिल गर्नको एक मात्र साधन हो। यदि हामी तपाईंको साइटमा अधिक यातायात आकर्षित गर्न रोक्छौं भने, हामी SEO को सब भन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षलाई उपेक्षा गर्नेछौं जुन व्यवसायहरूको लागि अधिक आरओआई ड्राइभ गर्दैछ।
यदि तपाईं ट्राफिकको बढ्दो संख्या देख्नुहुन्छ, तर यो वृद्धि तपाईंको रूपान्तरण दरहरूमा प्रतिबिम्बित हुँदैन, तपाईं वास्तवमै उत्कृष्ट जैविक परिणामहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्न।
जब एक साइट नराम्रो प्रेस प्राप्त गर्दै
ट्राफिक लाभ कहिलेकाँही कारणहरूको परिणाम हुनसक्दछ तपाईंले सामान्यतया बेवास्ता गर्नु पर्छ। जब कुनै व्यवसाय वा वेबसाइट छानबिन अन्तर्गत छ वा यदि यसले नकारात्मक प्रेस प्राप्त गरिरहेको छ भने, त्यो पुरानो मद्यको बोतल खोल्नु बुद्धिमानी हुनेछैन। यातायात मा वृद्धि, त्यो अवस्थामा, सकारात्मक छैन; वास्तवमा यो खराब छ।
खराब प्रेसले प्रयोगकर्ताहरूलाई पोष्टहरूमा नकारात्मक टिप्पणीहरू खारेज गर्न सक्छ, तपाईंलाई वफादार ग्राहकहरू गुमाउनका लागि, र तपाईंको स्थान SERP मा। सामान्यतया बोल्दै तपाईले यसलाई कुनै पनि हालतमा बेवास्ता गर्नुपर्छ।
सबै च्यानलहरूमा बढी यातायात ब्याकफायरिंग हुन्
जब हामी जैविक च्यानल भन्दा बाहिर हेर्छौं, हामी केहि परिस्थितिहरू पहिचान गर्न सक्दछौं जहाँ यो अधिक ट्राफिकको लागि उपयुक्त छैन। यदि तपाईं अन्य च्यानलहरू मार्फत तपाईंको ट्राफिक चलाइरहनु भएको छ भने साइटमा भुक्तान प्लेसमेन्ट जुन सामग्री, टेक्निकल एसईओ, वा यूएक्सको लागि अनुकूलित गरिएको छैन, तपाईंको प्रयासहरू फायर फायर हुन सक्छ। जब तपाईं पीपीसी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं प्रत्येक क्लिकको लागि भुक्तान गर्नुहुन्छ, त्यसैले क्लिकहरूको लागि तिर्नेहरू मात्र यी आगन्तुकहरूलाई तपाईंको पेजमा पाउने बित्तिकै छोड्न महँगो छ, विशेष गरी किनभने तपाईंले ०% आरओआई अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ।
ट्राफिक अनावश्यक बोट यातायात हो
यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं ट्राफिक स्रोतहरू र गुगल विश्लेषकहरूको प्रयोग गरेर च्यानलहरूमा ध्यान दिनुहोस्। यदि तपाइँको वेबसाइटले यसको ट्राफिक स्प्यामबट्सबाट प्राप्त गर्दैछ र मानव होईन भने, ट्राफिकको वृद्धि अर्थहीन हुनेछ। यो अनुमान गरिएको छ कि लगभग% about% वेबसाइट गतिविधि बोट द्वारा बनाईएको हो र यस बोट गतिविधिको आधा भन्दा बढी अवांछनीय हो।
स्प्यामबट यातायात बोट यातायातको एक प्रकार हो जुन अवैध छ। यो साइटहरू पठाइन्छ जुन स्किउ हुन्छ, र ती ट्राफिक डाटा फुलाउँछन्।
तपाईं सजिलै मूल्यवान संसाधनहरू नष्ट गर्दै हुनुहुन्छ
कहिलेकाँही, तपाइँको वेबसाइट ट्राफिक बृद्धि गर्दा तपाइँका श्रोतहरू धेरै पातलो हुन सक्छ। तपाईंसँग तपाईंको साइटमा सामग्रीको एक राम्रो राम्रो टुक्रा हुन सक्छ जुन ट्राफिकको धेरै संख्यामा आउँछ, तर यदि ती सामग्रीहरू तपाईंको दर्शकहरूसँग प्रासंगिक छैनन् भने, तपाईंले अनजानमा नतिजा भोग्न सक्नुहुन्छ।
यो मात्र सर्वर मुद्दाहरू मा रोक्दैन; यसले तपाईंको फ्रन्टलाइन स्टाफ र ग्राहक सेवा एजेन्ट कल गर्न, ईमेल र च्याटको जवाफ दिन, साथ साथै ग्राहकहरू हुन नदिएका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत सोधपुछ पनि गर्न सक्छ।
यो सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले SERP बाट उत्पन्न सीसाहरू प्रासंगिक छन्।
मूल्य, मात्र यातायात छैन
सबै यातायात मूल्यवान छैन; सबै यातायात राम्रो कुरा होईन; सबै यातायात अर्थपूर्ण छैन। साइटमा आउने यातायातको प्रकार फरक हुन्छ। जब हामी वेबसाइटमा ट्राफिक ड्राइभ गर्न धेरै स्रोतहरू र प्रयास राख्छौं, हामी यसलाई क्याभेटको साथ गर्छौं।
एसईओ को एक आधारभूत हिस्सा को रूप मा, Semalt वेबसाइटमा ट्राफिक कसरी पाउने भन्ने बारे सचेत छ, तर त्यो सबै कुरा होइन; हामीले तपाईंको वेबसाइटमा अर्थपूर्ण ट्राफिक पनि प्राप्त गर्न आवश्यक छ। यो ट्राफिकको वृद्धि गर्न मूल्यवान छैन जुन कुनै मानलाई योगदान पुर्‍याउँदैन, आगन्तुकहरू छन् जसले तपाईंको सामग्रीको अंशलाई संलग्न गर्दैनन्, वा जब तपाईं अप्टिमाइजेसन सुधार गर्न असफल हुन्छन् जसले अधिक रूपान्तरणमा पुर्‍याउँछ।
तपाईंको ट्राफिक र उनीहरूले लिने कार्यहरूको गुणस्तर महत्त्वपूर्ण छ, र हामीले त्यसलाई लिने प्रत्येक अप्टिमाइजेशन प्रयासको साथ हामी यसलाई हाम्रो दिमागमा राख्छौं।